रंगशालामा खेल्न कुवेत किन अनिच्छुक, एएफसीको रिपोर्टले झन बल थप्यो ! | | Neplays.com
रंगशालामा खेल्न कुवेत किन अनिच्छुक, एएफसीको रिपोर्टले झन बल थप्यो !
By Neplays	 Last updated Nov 7, 2019
फिफा विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा मंसिर तीन गते कुवेतसँग खेल्दैछ । यसका लागि रंगशाला तयार होला नहोला, यदि निर्माणधिन रहेको रंगशाला तयार नभए के होला, रंगशालामा खेल हुन्छ की हुँदै भन्ने धेरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन ।
एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् रंगशालामा खेल गराउने भन्दै अगाडी बढेको छ । तर पछिल्लो अपडेट अनुसार पुर्वाधार निरीक्षणका लागि आएको एएफसीको टिमले पनि दशरथ रंगशालाको काम र स्वरुप देखेर खुसी देखिएको छैन र त्यहि अनुसारको रिपोर्ट एएफसीलाई बुझाएको छ ।
घरेलु मैदानमा हुने भनिएको कुवेत विरुद्धको खेलको पुर्वाधार निरीक्षणका लागि फिफाको कमिटीले दशरथ रंगशालाको निरिक्षणमा सुन्तुष्टी देखाएन । चार बर्ष अगाडी आएको विनाशकारी भुकम्पपछि अहिलेपनि निर्माणधिन रहेको रंगशालाको काम अझैपनि सकिएको छैन, भन्नेले एक महिनामा पुरै तयार हुन्छ भन्ने छ, तर त्यो पनि कतै बोलीमा मात्र होइन भन्ने पनि शंका गर्ने ठुलो ठाँउ छ ।
फिफा पदाधिकारीले पठाएको रिपोर्ट
एएफसीका पदाधिकारीले नेपाल र कुवेत विच हुने भनिएको दशरथ रंगशालाको निरिक्षण गरेपछि एएफसीलाई रिपोर्ट बुझाएको छ । जसमा एन्फाका बारेमा नकारात्मक रिपोर्ट पठाएको छ । उसले रिपोर्टमा रंगशाला एन्फाको सम्पत्ती नभएको, राखेपको अधिनमा रहेको र रंगशालालाई कुवेत विरुद्धको खेल भन्दापनि दक्षिण एशियाली खेलकुद सागका लागि तयार पार्दै गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यो रिपोर्ट एएफसीमा पुगेपछि अब नेपाल र कुवेतको खेल कहाँ हुन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न छ, सुन्नमा आएअनुसार यो खेल भारतको गुवाहाटी वा भुटानमा गर्ने भन्ने तयारीपनि भइरहेको बताइएको छ ।
एएफसीका पदाधिकारी रंगशालाको निरिक्षण गर्न आउनु अघि नै कुवेतले एन्फालाई तथष्ट मैदानमा खेल गराउनेका लागि पहल गरेको थियो । गत अक्टोबरमा कुवेतले यो प्रस्ताव गरेपछि यसका बारेमा उनीहरुले कुवेतलाई कुनै जवाफ दिएन ।
कुवेतले यो खेल दोहामा गराउने र यसका लागि कुवेत फुटबल संघले यातायात र होटल खर्च ब्यहोर्ने पनि अफर गरेको स्रोतले बताएको छ । एन्फाले कुवेतको सो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा एएफसीलाई यो प्रस्तावका बारेमा जानकारी गरायो । जसमा कुवेतले केहि दिन अगाडी मैदानको अवस्थाका बारेमा एएफसीमा कम्प्लेन पनि गरेको थियो । यसको अर्थ कुवेत नेपालमा आएर खेल्ने मनसायमा छैन की भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कारण, कुवेतले नेपाल आउनका लागि दुई वटा विमान परिवर्तन गरेर आउनुपर्ने हुन्छ, नेपाल र कुवेतको सोझै हवाई सेवा छैन, उसले कतार, ओमान, आबुधावी, दुबईलाई ट्रान्जिट पारेर नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि उसले लामो समयको यात्रा गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि खेल हुने समयमा काठमाडौंको मौशम चिसो हुने र दशरथ रंगशालामा त्यो चिसोको असर पर्ने उसको अनुमान रहेको छ ।
यता एन्फाले पनि नेपाल र कुवेतको खेल र्फल्डलाइटमा खेलाउने तयारी गरेको थियो । यसको अर्थ खेल साँझ ५ देखि ६ बजेको विचमा गराउने योजना बनाएको थियो । चिसो साँझमा कुवेती खेलाडीलाई खेल्न कठिन हुने एन्फाको अनुमान थियो । गर्मी बाताबरणमा बस्दै आएको कुवेती खेलाडीहरु १४ डिग्री भन्दा तलको तापक्रममा खेल्न कठिन हुने एन्फाको अनुमान थियो ।
तर एएफसीको रिपोर्टले एन्फाको योजनामा कतै पानी फेर्ने त होइन भन्ने ठुलो प्रश्न खडा भएको छ ।
यता एन्फाले पनि परिषद्को आशा गरेर बसेको छ । रंगशालाको सबै भाग ठिक भएपनि भिआइपी प्याराफिट अझैपनि कहिले बन्छ एकिन छैन । एन्फाले कुवेत विरुद्धको खेलका लागि भिआइपी प्याराफिट नबनेमा सुरक्षाका लागि पुरै भाग छोपेर पनि खेलाउने बताएको थियो ।
अब एन्फा एएफसीमा बुझाएको रिपोर्टको जवाफ कुरेर बसेको छ । एएफसीले दुई दिन भित्रमा आफ्नो जवाफ फर्काउने छ र खेल कहाँ गर्ने भन्नेमा एकिन गर्नेछ ।
बार्सिलोनाका लागि महत्वपूर्ण साता
च्याम्पियन्स लिगः चेल्सीलाई चोटको चिन्ता
युरोपा लिगमा इन्टर मिलानको होम म्याच दर्शकले हेर्न नपाउने
प्रिमियर लिग जित्न लिभरपुललाई चार जित पर्याप्त
आर्मी राइनाे गाेल्डकपकाे फाइनलमा
मनाङ बुढासुब्बा गाेल्डकपकाे सेमिफाइनलमा